Seneterootii USA,Mootummaan Itoophiyaa Oromoota Hiriira Bahan ‘Humnaan Itti Dhufe,” Jechaatti Yaaddahanii Ministera Haajaa Alaa Isaaniitti Xalayaa Barreessan
Waxabajjii 26, 2014
Senater Mariya Cantwell
Asiin duratti seneteroota Amerikaa kutaa MN-tti mirga dhala-nama Itoophiyaa keessumattuu ka Oromootti yaaddahanii ministera haajaa alaa Amerikaatti xalyaa ergan.
Ammma ammoo seneteroora kutaa Seattle Washington Paatii Murraayii fi Maria Cantwell faatti ministera haajaa alaa Amerikaa Joon Keeriitti xalyaa barreesse.
Akka seneterootii kun jedhanitti kutaan isaanii (Seattle Washington) godina namii Itoophiyaa hedduun keessa jiraatu.Akka isaan gabaasa nama Oromoo hedduu irraa arganne jedhaniin barreessanitti Oromoon Itiyoophiyaa ttikeessatti mirga namummaa hedduu dhabu.
Hiriira nagaa hawaasii Oromoo magaalii Finfinnee seera malee aanalee Oromiyaatti baballifamte jedhanii hiriira bahan irratti mootummaan jeequmsaan itti dhufuu duwwaa mitii gaazexeessitotii oduu tana gabaasanis hidhamuun waan nama jeeqaati jedha gabaasni kun.
“Barattootii Oromoo karoora mootummaan magalaa Finfinnee Oromiyaatti baballisuuf qabu falmuun hiriira hedduu bahuun beekamaa.Hawaasnij Oromoo ammoo Oromootii lafa baballisuun kun qonnaan bulaa Oromoo lafa dhabsiisa,jedha.”
Seneterootii Amerikaa ammoo waahee hiriira kanaatii fi deebi iitti kenname baruu barbaadan.
Master Plan mootummaan Itoophiyaa Ebla 24,2014 baase mirga abbaa biyyummaa qonnaan bulaa Oromoo akkamiin miidha?
Mootummaan Itoophiyaa yaaddoo Oromoo kana deebii akkam kenne?
Oromootii Oromummaa isaaniitiin seera malee hidhamuu,dararamuu,ni ijjeefamuu?
Oromootii seera malee eennummaa isaaniitiin dhaabbilee barnootaatii harihamuu?
Minisitriin haajaa alaa USA yaaddoo tana akkamitti ibse?
Hawaasa Oromoo ykn mootummaa Itoophiyaa waliin yaaddoo tana irratti mari’achuuf karoorii qabame jiraa?
Seneterootii kun tana malee akka ministiriin haajaa alaa Itoophiyaatti demokiraasii fi olaantummaan seeraa jabaattu feena jedhan.
USA tana hojjachuuf akka seneterootii kun jedhanitti demokiraasiitti fayyadamanii mootummaa wayyaahaa qabaachaa,mirga ilmaan namaatii fi dignadee hunda qabdu qabaachuuf hojjatan feeti.
“Godinii keenna (Seattle Washington) namoonnii Itoophiyaa waan rakkoo biyya isaanii himachuuf akka fedhanitti hiriira bahanii akka jeequmsii biyya isaanii dhaabtu akka fedhanitti gaafatan,” jedhan.
Qondaalli ABO Yaasoo Kabbadaa fi Hidhamtoonni Biroon Hiikaman
KFOn "Mootummaan Waloo Dhaabbatee Waggaa Tokko Keessatti Filannoon Dhugaa Haa Geggeeffamu," Waamicha Jedhu Dhiheesse
Haleellaa Togoogaa Irratti Ibsa Jaarmayoota fi Deebii Mootummaa
Buufati Doonii Barbaraa Banamuun Hojii Jalqabe
Filannoo Waliin Yakka Wal Qabate Kanneen Dalagan Namoonni 194 To’atamuu Komishinerri Poolisii Naannoo Kibbaa Beeksisan
Hojjettoota Eegumsa Fayyaa: Dho’iinsi Gabaa Tigraay Keessatti Lubbuu Galaafate